इरानी युवती किन असाध्यै सुुन्दरी हुन्छन ? यस्तो छ ८ रहस्य पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजनइरानी युवती किन असाध्यै सुुन्दरी हुन्छन ? यस्तो छ ८ रहस्य पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला
इरानी युवती किन असाध्यै सुुन्दरी हुन्छन ? यस्तो छ ८ रहस्य पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला
February 1, 2021 admin मनोरंजन 9200
एजेन्सी- आकर्षक को हुन् ? यसमा सबैको मत मिल्छ भन्ने छैन । भूगोल र समुदाय अनुसार सुन्दरताको मापन पनि भिन्न भिन्नै हुनसक्छ ।
कतै कालो छाला मन पराइन्छ भने, कतै गोरो । कतै पातलो ओंठलाई आकर्षक मानिन्छ, त कतै मोटो ओंठलाई । कसैले सलक्क केस रुचाउँछन् भने, कसैले कर्ली ।
यद्यपी झट्ट हेर्दा हामी जस्तो सौन्दर्यबाट मोहित हुन्छौं, त्यसमा अधिकांशको मन मिल्छ । यस हिसाबले सौन्दर्यको चर्चा गर्दा इरानी महिलाहरु अग्रस्थामा पर्छ । आँखा, अनुहारको बान्की, शरीरको बनौटले उनीहरुतर्फ सबैको ध्यान खिचिन्छ ।
इरान एक मुस्लिम बहुल देश हो । त्यहाँ महिलाको जीवन त्यती सहज छैन । यद्यपी सुन्दरताको कसीमा उनीहरुले विश्वका महिलाहरुलाई उछिन्छन् ।
इरानी महिला सुन्दर हुनुको कारण वंशानुगत गुणलाई दिइन्छ । अर्थात वंशानुगत रुपमै उनीहरु सुन्दर एवं आकर्षक अनुहार लिएर जन्मन्छन् । जन्मजात उनीहरुले सुन्दर अनुहार पाउँछन् ।
इरानी महिला संसारभरकै सुन्दर मानिनुको कारण त्यहाँको भूगोल पनि हो भनिन्छ । वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दा उनीहरु बाँचेको भूगोल र प्राकृतिकले यसमा खास भूमिका खेलेको छ ।
इरानी महिला आकर्षक हुनुमा उनीहरुको खानपानले पनि काम गरेको छ । भनिन्छ, उनीहरु खानपानमा ज्यादै सर्तक छन् ।
इरानी महिला आकर्षक हुनुमा उनीहरुको जन्मजात गुण त छँदैछ, त्यसमाथि उचित खानपान नै हो ।इरानी महिलाहरुले आफ्नो डाइटमा माछा र ओखर सामेल गर्छन् । उनीहरु मह पनि नियमित रुपले सेवन गर्छन् ।
इरानी महिलाहरु विशेषगरी गहुँलाई पिनेर बनाइएको खाना ‘बल्गर’ खाने गर्दछन् । यसले अनुहारको छालाको चमकका साथै शरीरीक बनावटलाई नियन्त्रित गर्ने गर्दछन् ।
इरानी महिला आफ्नो अनुहारलाई नरिवलको तेलले मसाज गर्दछन् । नरिवलको तेलले छालाको चमक बढाउँछ । जसका कारण बढ्दो उमेरको असर अनुहार दश भन्दा कम देखिन्छ । ओंठलाई सुन्दर बनाउनका लागि उनीहरु अनारको तेलको प्रयोग गर्छन् ।
गुलाबको पानीले अनुहार धुने
इरानी महिलाहरु गुलाबको पानीले अनुहार धुने गर्छन् । खराब अनुहार सुन्दर बनाउन यसले राम्रो काम गर्छ । गुलाबको पानीमा भिटामिन ए र ई हुन्छ, जो स्वस्थ्य छालाको लागि एकदमै आवश्यक मानिन्छ । इरानकी एक मोडलले दिएको अन्र्तवार्तामा यो रहस्य खुलाएकी थिइन् ।
दही र पुदिनाको सेवन
उनीहरु धेरै भन्दा धेरै दही तथा पुदिनायुक्त पेय पदार्थ ‘शिनेना’को सेवन गर्दछन् । यसको सेवनले अनुहारको छाला तथा कपाललाई स्वस्थ राख्नुका साथै अनुहारमा चाउरीपना हुन दिदैन ।
इरानी महिला विशेषगरी, दही , तरकारी तथा मासुबाट बनेका सुपका सेवन अधिक मात्रामा गर्दछन् । यसले सौन्दर्य बढाउनुका साथै शरीरको तौलन नियन्त्रित रहन्छ ।
इरानी महिलाहरुमा प्लाष्टिक सर्जरीको क्रेज बढ्दो क्रममा छ । प्लाष्टिक सर्जरीकै कारण पछिल्लो समय उनीहरु आर्कषक देखिन थालेका छन् ।
November 10, 2020 admin मनोरंजन 14771
काठमाडौं । आजभोलीको भागदौड र ब्यस्तताले गर्दा मानिसको विवाहको केहि दिन पछि नै सुखभोगको चाहाना हराउन थालेको छ । दिनको थकान र अर्को दिनको कार्यालय वा बच्चाहरूको स्कूलको कारण ओछ्यानमा यो सुत्ने बित्तिकै निद्रा लाग्न
December 18, 2020 admin मनोरंजन 3561
चलचित्र ‘स्वागतम् माई दिलपुर’ को ‘बोल्दीन जेपिटी’ बोलको गीत सार्वजनिक भिडियो हेर्नुहोस !
December 28, 2020 admin मनोरंजन 4732
चलचित्र ‘स्वागतम् माई दिलपुर’ को ‘बोल्दीन जेपिटी..’ बोलको सांगीतिक कोशेली सार्वजनिक भएको छ । साईराम पिक्चर्सको आफ्नै युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा जयकिशन वस्नेत, अनिला रायमाझी, दिपा सिङ्ग ठकुरी लगायतका कलाकार रहेका छन् ।